Qaraxyada Afurur: Maamulka Isbitaalka Bilcil Carmo oo ka Hadlay Khasaaraha Afurur (dhegayso) – Radio Daljir
Qaraxyada Afurur: Maamulka Isbitaalka Bilcil Carmo oo ka Hadlay Khasaaraha Afurur (dhegayso)
Siteenbar 1, 2017 6:41 g 0
39-qof oo dhaawac iyo dhimasho isugu jira ayaa galabta la gaarsiiyay isbitaalka degmada Carmo ee gobolka Bari, kuwaasi oo 2 kamid ah isbitaalka ay ku geeriyoodeen, halka 4 ruux oo mayd ah dib loo
celiyay si loo aaso, sidaasi waxaa Radio Daljir u sheegay Siciid Cabdulaahi Maxamuud oo kamid ah maamulka isbitaalka Bilcil Carmo.
Siciid ayaa dhanka kale sheegay dadka dhaawacyada in ay ku jiraan dad dhaawacooda halisyahay oo ay u gudbinayaan magaalada Bosaaso ee xarunta gobolka Bari si loo dabiibo. Dadkan ayaa ku waxyeeloobay laba qarax oo lagu aasay deegaanka Afurur oo ay saldhigyo ciidan ku leeyihiin ciidamada difaaca Puntland ee dagaalka kula jira ururka Alshabaab ee ah buuralayda Calmadow.
Dowladda Puntland ayaan illaa iyo hadda ka hadlin dhacdada Afurur ee maanta. Ururka Al-shabaab ayaa asagu horay u sheegtay, faafiyayna si maqal iyo muuqaal ah, weerarkii 8-dii bishii Juun ka dhacay deegaanka Afurur oo lagu qaaday saldhig ciidamada dowladda Puntland ku leeyihiin deegaanka.
Warbixinta Ciidda, Camay & Garoowe (dhegayso)